Ikraan Tahliil: Shan arrimood oo hay’adda ICG ay ka dhahday khilaafka Farmaajo iyo Rooble - Bulsho News
Wax ka ogow shan waxyaabood oo sababa dhalmo la'aanta ragga
Ikraan Tahliil: Shan arrimood oo hay'adda ICG ay ka dhahday khilaafka Farmaajo iyo Rooble
Ikraan Tahliil: Shan arrimood oo hay’adda ICG ay ka dhahday khilaafka Farmaajo iyo Rooble
Xigashada Sawirka, VillaSomalia/OPM
Kaddib muddo toddobaadyo ah oo ay cirka isku shareertay, xiisadda u dhaxeysa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa u muuqato arrin caalamka laga hadal hayo.
Hay’adda Xasaradaha Adduunka ee ICG, ayaa warbixin ay soo saartay kaga hadashay xaaladda Soomaaliya iyo dhibaatooyinka laga dhaxli karo khilaafka madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.
Khilaafka Farmaajo iyo Rooble
Ka dib dilkii ay dowladdu sheegtay in loo geystay Ikraan Tahliil Faarax oo ka tirsaneyd hay’adda nabadsugidda, madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha ayaa labaduba agaasime cusub u magacaabay madaxa hay’adda.
Iyadoo arrintaas tusaale u soo qaadatay, hay’adda ICG waxay beesha caalamka ugu baaqday in ay il gaar ah ku eegaan kooxaha ay sheegtay inay fowdo ka wadaan dalka, ayna ku hanjabaan cunaqabateyn.
Xiriirkii Rooble iyo Farmaajo ee mar wanaagsanaa, ayaa sii xumaanayay tan iyo bishii May markii uu madaxweynuhu u xil saaray ra’iisul wasaaraha arrimaha doorashooyinka.
Rooble ayaa aqbalay kaddib markii ciidamo xiriir la leh xubno mucaaradka ka tirsan sida madaxweyneyaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed uu iska hor imaad dhex maray ciidamo kale oo taageersan Farmaajo.
Xubno taageersan madaxweynaha oo aqalka hoose ka tirsan ayaa ansixiyay in muddo labo sano ah uu madaxweynuhu sii hayo xilka, atas oo uu ka dhashay muran.
Kaddib isku dhacyadaas, madaxweynaha ayaa mas’uuliyadda doorashooyinka u dhiibay Rooble.
Si kastaba, ICG waxay tilmaamtay in “sida ay haatan xaaladdu tahay ay keentay cabsi ah in ciidamada kala taageersan madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha uu isku dhac dhex maro taas oo saameyn ku yeelan karta hannaanka doorashada.”
Ciidamadii “tababarka loogu diray Eritrea” iyo Ikraan Tahliil
Hay’adda ayaa sheegtay in Ikraan oo ka tirsaneyd hay’adda NISA “ay suuragal ahayd in laga cabsi qabay inay fashili doonto ciidamadii muranka uu ka dhashay ee ay Soomaaliya tababarka ugu dirtay Eritrea, sannadkii 2019”.
Dowladda Soomaaliya ayaan faahfaahin badan ka bixinin arrintaas, waxaana jiray guddi xaqiiqo raadin ah oo loo saaray si ay u baaraan cabashada waalidiinta.
“Inta badan ciidamadaasna kuma aysan soo laaban Soomaaliya”, ayey tiri hay’adda Xasaradaha Caalamka. “Taas waxay sababtay in qoysaskooda ay dalbadaan in war laga siiyo halka ay ku sugan yihiin.”
Waxaa loo maleynayaa in Ikraan ay “fashilin rabtay xogta ciidamadii Eritrea”, sida ay ICG sheegtay.
Waxaa horey u soo baxay warar aan la xaqiijin oo sheegayay in ciidamadaas Soomaalida ah la geeyay furinta hore ee dagaalka Itoobiya ee gobolka Tigray.
“Arrintan ayaa maamulka Farmaajo ku noqotay xasarad siyaasadeed. Inkastoo ciidamo Soomaali ah tababar loogu diri jiray dibadda, sida Turkiga, haddana tan Eritrea ma ahayn mid la ogaa,” ayaa ku xusan qoraalka ICG.
Qoysaska waxay sheegeen in aysan wax war ah ka helin carruurtooda. Qoysaskaas ayaa dhigay dhowr dibadbadyo ay ku dalbanayaan in faahfaahin dheeraad ah laga siiyo tababarkan.
Dhexdhexaadinta madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha
Waxaa durba billowday dhexdhexaadin taas oo aan miro dhalin noqonin.
ICG waxay tiri: “Ku xigeenka afhayeenka aqalka hoose Cabdiwali Ibraahim Muudey ayaa 7-dii bishan isku dayay inuu dhexdhexaadiyo labada mas’uusl, balse wuu ku guul darreystay.”
Hay’adda ayaa sheegtay in markii hore uu madaxweynuhu oggolaaday xil ka qaadista agaasimihii hore ee NISA, Fahad Yaasiin, isla markaana uu xitaa la kulmay ninkii lagu beddelay ee Bashiir Goobe, balse “uu ku xiray shuruudo ay ka mid yihiin in meesha laga saaro baaritaanka kiiska Ikraan”, waa sida ku xusan qoraalka hay’adda Xarasadaha Caalamiga ah.
“Markii ay wada hadallada dhicisoobeen, madaxweynaha ayaa bilaabay in xubno ay isku dhow yihiin uu u magacaabo xilal ammaanka ah. Wuxuu Fahad ka dhigay la taliyaha ammaanka.”
“Wuxuu sidoo kale Yaasiin Cabdullaahi Farey oo ahaa madaxii xabsiga Godka Jilicow uu u magacaabay agaasimaha ku meel gaarka ah ee NISA, taas oo ka hor imaaneysay magacaabiddii Bashiir Goobe ee Ra’iisul Wasaaraha,” sida ay xustay ICG.
Haddana 8-dii bishan September, Rooble ayaa beddelay wasiirkii amniga qaranka oo ay madaxweyne Farmaajo isku dhow yihiin, isagoo ku beddelay nin ay isku dhow yihiin taas oo xiisadda sii xumeysay.
Saameynta ka dhalan karta xiisadda madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha
“Xasaraddan ugu dambeysa ayaa sharraxaad ka bixineysa xaaladda Soomaaliya ee qasan. Wixii ka dhex dhacay NISA iyo isku dhacyadii bishii April ayaa muujinaya in labada mas’uul ay weli kala taagan yihiin mowqifyo kala fog,” ayey hay’adda sheegtay.
Mid ka mid ah dadka ay aadka isugu dhow yihiin Rooble ayaa Hay’adda Xasaradaha Adduunka u sheegay in khilaafka “aanan la xallin karin”.
Dadaal kale oo dhexdhexaadin ah oo ay horkacayeen madaxweyneyaasha maamul-goboleedyada Galmudug iyo Koofur-galbeed oo 11-kii bishan dhex maray Farmaajo iyo Rooble ayaa ku soo dhammaaday is afgarad la’aan.
Hay’adda waxay ka digeysaa in khilaafka uu saameeyo doorashada iyo amniga dalka
ICG waxay warbixinta ku tiri: “Khatarta waa mid aad u sarreysa” iyadoo ay taasi “rabshado u horseedi karto dalka”.
Hay’adda ayaa warbixinteeda intaas ku dartay in labada dhinac ay “ciidamada la kala safan la hadleen durba.”
ICG waxay ka digeysaa “tallaabooyinka xiga ee labada dhinac ka imaan kara ay sii xumeyn kara xaaladda.”
“Dadka qaar ayaa ka walaacsan in laga yaabo in madaxweynaha uu ka codsado guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh cabdiraxmaan, oo ay isku dhow yihiin inuu keeno mooshin xilka looga qaadayo Rooble,” ayaa ku xusan qoraalka.
Hay’adda ayaa sheegtay in taasi ay saameyn balalaran ku yeelan doonto u diyaar garowga doorashada.
Sidoo kale waxay “tallaabadaas keeni karta arrimo dhanka sharciga ah, maaddaama baarlamaanka ay muddo-xileedkiisa ku ekeyd bishii December 2020.”
“Rooble ayaa la yimid qorshooyin lagu xakameynayo dhaqaalaha dowladda, wuxuuna amray in aan wax lacag ah laga bixin karin bankiga dhexe, iyadoo aan isaga fasax laga heysan.”
Xalka khilaafka labada dhinac
Hay’adda Xasaradaha Caalamiga ah ee ICG, ayaa ugu baaqday labada dhinac in ay dib uga degaan halka ay joogaan.
“Intii ay raadin lahaayeen arrimo sii kala fogeeya, waa in ay diiradda saaraan dhammeystirka arrimaha doorashooyinka,” ayey tiri ICG.
Hay’adda ayaa ku baaqeysa in “madaxweyne Farmaajo iyo xulafadiisa aysan isku dayin in ay xilka ka qaadaan Ra’iisul Wasaare Rooble, si aysan taas u carqaladeynin arrimaha doorashada.”
Mucaaradka qaarkood ayaa aaminaad u muujiyay Rooble. In laga takhalusana waxay hay’adda ku tilmaamtay “in ay sii fogeyn karto mucaaradka ayna saameyn ku yeelan karto heshiiskii doorashada laga gaaray.”
Waxay madaxweynaha ugu baaqday inuu ku dhegganaado ballaanqaadkiisii hore ee ahaa inuu Ra’iisul Wasaaraha uu ku wareejiyay maamulka doorashada, iyo in “uu oggolaado ninka uu Rooble u magacaabay NISA”.
Waxay sidoo kale Rooble ugu baaqdeen inuu dirradda saaro dardar gelinta doorashada uuna ka dhigo muhiimadda koowaad.
Waxay ugu dambeyn ku baaqday in la sii wado dadaallada xalka loogu helayo khilaafka madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha oo haatan meel xun maraya.
How we met: ‘By the time I called,...
Axmed Madoobe oo daahfuray Kulan wadareedka Golaha wasiirada...
Diblomaasi Yurubiyaan ah oo ka yaabay wasakhda taalla...
Haweeneyn $20,000 siisay BARKHAD JAAMAC kadib lacagtii ay...
Dhirbaaxo: Liverpool Oo Waayi Doonta 4 Xiddig Kulanka...
In South Sudan, flooding called ‘worst thing in...
‘The heaven of film-making’: how a Dalit orphan...
“Waxaan shirkaddeenna ka soo bilownay eber, haddana malaayiin...
Aston Villa Oo Man United Ku Dhex Garaacday...
Dhex-dhexaadintii Farmaajo iyo Rooble oo xalay dib loo...